ओली १७ सालको दोहर्याउने प्रतिगामी आधार खडा गर्दैछन्: श्रेष्ठ - Himal Dainik
ओली १७ सालको दोहर्याउने प्रतिगामी आधार खडा गर्दैछन्: श्रेष्ठ
नेपाल ७ बैशाख २०७७, आईतवार ००:००
‘संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको बेलामा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेला न कुबेला राजनीतिक दलको विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश सिफारिस गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिलेको अहिल्यै इमर्जेन्सी बिल जस्तो गरी तुरुन्त स्विकृति प्रदान गर्ने कार्य गरे ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुधको साक्षि बिरालोजस्तो भएको छ ।
कोविड–१९ ले सम्पूर्ण विश्व र नेपाल पनि आक्रान्त भइरहेको तथा देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आवश्यक भएको वर्तमान स्थितिमा यति हतारो गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने किन ? यो कसलाई के धन्दा घरज्वाँईलाई खाने धन्दा भन्ने नेपाली उखानजस्तो भएन र ? हो कुनै पनि पार्टीको एकता सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति मिलेसम्म हुन्छ । कसैलाई पनि सिस्नु र पानीले ठट्टाएर पार्टीमा बसी राख भन्न सकिंदैन ।
ऐन कानुनले पार्टी जुटाइ राख्ने पनि होइन । तर प्रधानमन्त्री दिमागमा देश सङ्कटमा परेको बेला राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने, दलहरुलाई बदनाम गर्ने र वर्तमान ब्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने शैतानी विचार किन आयो ? कहिं प्रधानमन्त्रीले अर्को सत्र साल दोहर्याउने प्रतिगामी आधार खडा गर्न खोजेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ छ । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर भोट माग्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार बाँकी छ र ?
यतिखेर नेकपा होस वा अरु कुनै दल फुटाउने योजना, त्यसका लागि पृष्ठभुमि बनाउनु महाभुल मात्र होइन इतिहासमै अक्षम्य अपराध हुने छ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा देखापरेको सत्ताको उन्माद र अहंकारले देशमा सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्दछ । समयमै सचेत होऔँ ।’
अघिल्लोडाक्टर पुनलाई कोभिड-१९ विरूद्धको अभियानलाई सहयोग गर्न बोलाइएको हो: स्वास्थ्य मन्त्रालय
पछिल्लोकविता: सहबास ती रातहरुसँग